अधिवेशनमा आउन म सबैलाई आग्रह गर्छु :विकासराज न्यौपाने कार्यवाहक अध्यक्ष ,नेजा - Enepalese.com
अधिवेशनमा आउन म सबैलाई आग्रह गर्छु :विकासराज न्यौपाने कार्यवाहक अध्यक्ष ,नेजा
इनेप्लिज २०७८ साउन ६ गते १०:३४ मा प्रकाशित
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ(नेजा)का कार्यवाहक अध्यक्ष विकासराज न्यौपाने संग सातौं अधिवेशन तथा १४ औं साधारणसभाको बारेमा ईनेप्लिजले लिएको कुराकानीमा १४ औं साधारणसभाको सम्पूर्ण तयारी लगभग सवै सकिएको बताए । अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ड्यालसमा बसोबास गर्दै आएका न्यौपाने व्यवसायी पनि हुन् । उनले सबैले सामुहिक जिम्मेवारीका साथ काम गरेको बताए ।
उनले विशेषगरी उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा रहेर संचार क्षेत्रमा संलग्न साथिहरु विच आफ्नो कामलाई अझ सहज कसरी वनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल हुने जनाए ।
अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ जस्ताको त्यस्तै :
सातौं अधिवेशनको तयारी के कस्तो हुदैछ ?
संघको सातौं अधिवेशन तथा १४ औं साधारणसभाको सम्पूर्ण तयारी लगभग सवै सकिएको छ । अधिवेशन गर्नका लागि हामीले केही साता अघि देखिनै विभिन्न समितिहरु वनाएका थियौं । कामको बांडफाड गरिएको थियो । सबैले सामुहिक जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुभएको छ । यही वुधवार देखिनै अधिवेशन स्थलमा साथिहरु आउने जानकारी हामीले पाएका छौं । अधिवेशनमा सहभागी हुन सवै साथीहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु ।
यो अधिवेशनमा के कस्ता बिषयहरुमा केन्द्रित हुने छ ?
नेजा भनेको उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा वसोवास गर्ने संचार क्षेत्रमा संलग्न साथिहरुको साझा संस्था हो । हाम्रा लागि प्रवासमा पत्रकारिता गर्नु सजिलो छैन । यो अधिवेशनमा हामी संचारकर्मी विच भेटघाट, अनुभव आदान प्रदान गर्छौ । सामुहिक हितका विषयमा कुराकानी हुने छन् । विशेषगरी उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा रहेर संचार क्षेत्रमा संलग्न साथिहरु विच आफ्नो कामलाई अझ सहज कसरी वनाउन सकिन्छ यसमै छलफल हुन्छ । संस्थागत विषयमा पनि कुराकानी भईहाल्छ । विद्यान अनुसार नियमित गर्नु पर्ने कार्यहरु पनि हुने छन् । मुख्य रुपमा उत्तर अमेरिकामा वस्ने पत्रकारले भोग्दै आएका समस्या, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, नेजाको भुमिका के हुदा राम्रो हुन्छ यही विषयमा छलफल गर्ने हो । सहभागी साथिहरुले यसै विषयमा गहन विचारहरु राख्नु होला भन्ने मलाई आशा छ ।
मुख्य कार्यसूची( एजेन्डा) के अघि सारिने छन ?
हाम्रा केही नियमित एजेन्डा छन् । मैले माथिनै भने विधान अनुसार नयां कार्यसमितिको निर्वाचन हुने छ । तर, मुख्य कुरा त उत्तर अमेरिकामा वसेर संचार क्षेत्रमा सक्रिय संचारकर्मीलाई नेजाले कसरी सहयोग गर्न सक्छ यो नै छलफलको विषय हो ।
अधिवेशनमा नेपालवाट पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल आउंदै हुनुहुन्छ । उहा विहिवार विहान आउने कार्यक्रम छ । यस्तै पत्रकार महासंघ तथा प्रेस काउन्सीलका पुर्व सभापति हरिहर विरही, वरिष्ठ पत्रकार तारा वराल, योगेश उपाध्याय लगायत वरिष्ठ तथा अग्रज पत्रकारको सहभागिता हुने छ । वासिंटन डिसी स्थित नेपाली राजदुत, दुतावासका पदाधिकारी, एनआरएनएका पदाधिकारीहरु लगायतको सहभागिता हुने छ ।
दुई दिने अधिवेशनमा कार्यक्रम के के हुने छन ?
जुलाई २४ र २५ मा गरी २ दिनसम्म अधिवेशनका कार्यक्रमहरु हुनेछन् । पहिलो दिन शनिवार उद्घाटनको कार्यक्रम हुनेछ । दोस्रो दिन बन्द सत्रका साथै निर्वाचनको कार्यक्रम हुनेछ । खासगरी हाम्रो परिवारका सदस्यहरुविच सुख दु:ख बाड्ने एउटा चौपारीको रुपमा हामीले यस अधिवेशनलाई लिएका छौं ।
तपाई कार्यवाहक अध्यक्ष , तपाईकै नेतृत्वमा चुनाव हुदैछ ? यस पटक माहौल कस्तो छ चुनाव को ?
यस पटक हामीले नेतृत्वमा को आउछ भन्ने पक्षलाई बढी महत्व दिएका छैनौं । विगतमा जस्तो चुनाव लागेजस्तो पनि मलाई लाग्दैन । यस क्षेत्रमा वसेर जसले सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएको उहांहरुलाई नेजाले के सहयोग गर्न सक्यो ? यो छलफलको विषय हो । नेतृत्वमा जो साथीहरु आउनुहुन्छ सक्षम व्यक्ति आउनु हुने छ । संस्थामा को छ भन्ने भन्दखा पनि संस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा कति काम गर्न सक्यो भन्ने महत्वपुर्ण हो । सवै संचार क्षेत्रमा लाग्नु भएका साथिहरुलाई संगै लिएर हिड्न सक्ने नेतृत्व आउंछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वासिंगटन राज्यको शियाटलमा संघको छैटौं अधिवेशन तथा १२ औं साधारणसभाले तत्कालिन अवस्थामा सुदीप पन्तको अध्यक्षतामा कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । सर्वसम्मत रुपमा साथीहरुले हाम्रो कार्यसमितिको निर्माण गर्नुभएको थियो । तर तत्कालिन अध्यक्षले घरायसी कारणवाट राजिनामा दिएपछि म कार्यवाहक अध्यक्ष हुन पुगें । म कार्यवाहक भएको केही महिना पछि कोभिड १९ को समस्या देखियो । यसमा पत्रकार साथिहरुलाई हामीले केही सहयोग गर्न सक्यौं । मैले व्यक्तिगत तवरवाट पनि यसमा पहल गरे । नेजाका सदश्य बिष्णुहरी घिमिरे अवस्थ्य हुनुभयो हामीले उहांलाई पनि केही सहयोग गर्न सक्यौं । यस्तै नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको अनुरोधमा हामीले आर्थिक सहयोग गरेका छौं । यस विचमा एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष उम्मेदवार सहभागी नेजा डिवेट पनि आयोजना भयो । यो निकै सफल भएको प्रतिकृया आए ।
तपाईको पनि नाम नेतृत्वमा आई रहेको छ , के भन्नु हुन्छ ?
सबै साथीहरुले मलाई विश्वास गर्नु हुन्छ भने म अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार छु । तर, म भन्दा सक्षम साथिहरु संस्थामा आउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । योग्य व्यक्तिका लागि साथिहरुले पहल गर्नु हुन्छ भने म नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन । म नेतृत्वमा कोही आउनु हुन्छ भने स्वागत गर्न तयार छु । अहिले त मेरो र यो कार्यसमितिको जिम्मेवारी भनेको अधिवेशन सफलतापुर्वक सक्ने हो ।
संघका सदस्यहरुलाई केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
सर्वप्रथम म सबै सदस्यहरुलाई अधिवेशनमा सहभागि हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु । अग्रज संस्थापक ज्यूहरुलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्दै सहभागिताका लागि अपिल गर्दछु । सदस्य नहुनुभएको पत्रकारहरुलाई पनि यो हामी सबै पत्रकारहरुको साझा संस्था भएकाले विना संकोच संघको उद्घाटन सत्रमा आउनुहुनका निम्ति अनुरोध गर्दछु । अधिवेशन सफल पार्न भूमिका खेल्नुभएका सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संस्थालाई अझ बलियो बनाउनका निम्ति के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारे सबैलाई सामुहिक ढंगले सोचेर अघि बढ्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्दछु ।
सगसगैं अव हामी पत्रकार साथीहरु पनि यहाको मुल धारको पत्रकारितामा कसरी प्रवेश गर्न सक्छौं वा हामी पछिका पुस्ताहरुलाई यहाको मुल धारको मिडियामा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ त्यसबारे पनि लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसका निम्ति पनि हामीहरु विच गहन छलफलको खाचो देखिएको छ । अन्त्यमा, तपाई र तपाईको अनलाईनलाई यो अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।